Wakiilka Jane Body Wakiilka Jane Body
Ma waxaad tahay oo dhan set inuu raaco wadadii Baare iyo arko oo dhan marsho u xiiso badan ayay isticmaalaa on ergooyinka iyada? Haddii ay haa tahay, markaas Agent Jane Body waa mid ka mid ah aad ka sugayeen. Raadinta at Daalacanayo kulankaan booska video, Waa cad dahay in ciyaartoy badan yihiin kaabayaasha dhaqaale dunida basaasyo qaadashada on ergooyinka khatar ah. ciyaarta booska Tani waa dawayn waayo dadka oo dhan sida halkaas.
About Developer ah|
Systems Microgaming Software Ltd. ku salaysan yahay ee Isle of Man, ku yaal badda u dhaxaysa Ireland iyo England. sanadkii 1994 goob joog kaca ah in industry casino la horumarinta Microgaming isku dayaya gacmahooday kulan booska kala duwan la mawduuc xiiso leh noocyo kala duwan ah, mid ka mid ah taas oo ah Wakiilka Jane Body.
Ciyaarta ayaa waxaa dhan ka dhigay la 5 sets ambadeen. Waxaa jira 9 paylines ciyaartoyda to in ujeedkiisu yahay. calaamadaha waxaa hal-abuur sameeyey inuu keeno ciyaartoy ee niyadda basaasnimo ah. Inta badan, ay ka mid oo dhan, alaabtii Baare ah, nooca kala duwan ee ka dhisan - marsho baraf, joog cat huruud, quusto a, dharka fiidkii ah, iyo dhar tuug bisad loo baahan yahay by Baare in la beddelo kulan oo ay halka u basaasayeen. Waxaa ka mid ah calaamadaha kale waa la dhisay-in aragtida X-ray, xanjo qarxa, Shaker is biirsaday Martini iyo dhalooyinka, qalab curcurka ah, lipstick, iyo baastoolad; oo dhan si cad u dooneysa ee kor aad geeso Baare.
logo ee ciyaarta u dhaqmo sida icon ku kala firdhi, oo masuul ka ah bixinta 15 dhigeeysa si xor ah u ciyaaryahanka la multiplier a 3x. Kuwani 15 dhigeeysa free yihiin dib-u-triggerable haddii isku darka kala firdhiso waxaa mar kale helay inta lagu guda jiro kuwaas oo dhigeeysa free.
headshot ee Ms. Body, dibadeed ee ciyaarta ku siinaysaa fursad u leedahay in 2x multiplier a of qadarka guul aad. kala duwan sharadka The kama badan karto 45 oo uu bilaabo ka yar intii 0.01. Tani waxay ku xidhan tahay tirada paylines aad doorato in aad la ciyaaro. Iyada oo riix badhanka ah ee a, ciyaaryahan isticmaali karaan doorashada 99 auto dhigeeysa la isticmaalayo feature autoplay ee ciyaarta ka.
Oo weliba, Wakiilka Jane Body sidoo kale leeyahay button khamaar in ay sii raaxeysan ciyaartoyda in khamaar u badsado lacagta guul ay ka murmin xaalkooda joog saxda ah / Midabka kaarka ciyaareed ku cad.
Inkastoo tirada yar ee fursadaha bonus, kulankaan Agent Jane Body waa weyn mahadiyo ku caashaqi jiray casino online guud ay sabab u tahay gameplay xiiso leh tiirarka ugu yaraan iyo ugu lamoodaa hufan.